Iklabishi iklabishi iklabishi ijikeleza Le ndlela yokupheka iiklabishi ezitshiweyo zitsha kwaye ingabethwa, nangona kunjalo, umzuzwana nje wokugcwalisa ukuzaliswa kweqabunga leklabishi uhlala kubo kule recipe, kodwa umgaqo-siseko wokwenza amaqabunga eklabishi uhluke ngokusuka kumnye esasikwenzayo! Amaqabunga eeksikishi zaseSavoy anesakhiwo esicincileyo, ngokungafani namaqabunga eklabishi omhlophe, nangaphezulu kweklabishi ye-Peking, nangemva kokucinywa kwemizuzu engama-50 bahlala bexhuma kancane, kodwa inkukhu yenkukhu, ngokuchaseneyo, ifumana i-juiciness kunye nephunga le-sauce elimuncu kunye ne-mushroom yokuzalisa, inyama iyahlutha emlonyeni!
I-Savoy iklabishi 1 pc.
I-sweet pepper 0.5 ipcs.
Cream Cream 400g
Ioli ecocekileyo ye-sunflower 200 ml
Inkukhu ye-Chicken 600g
Amakhowe amaqanda 400 g
Inyathelo 1 Ukulungiselela iklabishi iklabishi iklabishi iklabishi ihamba kunye neenkukhu kunye namakhowe, sidinga inkunzi enye yeklabishi ye-savoy, ii-2 zebhokhwe, ama-mushroom, i-carrots enkulu, i-anyanisi (akukho xabiso), i-pepper ebomvu, i-ukhilimu omuncu 15%, i-sunflower ecocekileyo ioli, ityuwa , umsila omnyama.
Inyathelo 2 Ukukhupha i-fillet, yomele ngehayile yephepha uze uyibeke efrijini imizuzu eyi-10. Ngaloo ndlela, kwimeko echongile, kuya kuba lula ngathi ukusika inyama. Siyinqumle i-fillet nganye kwiinqununu ezili-12-13, ngokupheleleyo siya kufumana amaqhekeza angama-25.
Inyathelo 3 Ukubetha ngokukhawuleza iziqwenga zenkukhu, inyuse kunye nepipper.
Inyathelo 4 Inyama ilungisiwe.
Inyathelo lesi-5 Ngoku sisebenza kwiklabishi. Sifaka ipompu enkulu emlilweni, uthele amanzi kwaye usiyise emathunjini, ubeke iklabishi yonke emkhatsini wamanzi abilayo kwaye, njengokuba amaqabunga aphezulu elula, siyawasika kwaye uwafake kwisitya. Ngoko senza kunye nayo yonke iklabishi, de kube amaqabunga awakulungele ngokupheleleyo ukugubungela amaqabunga eklabishi.
Inyathelo 6 Makuyeke amaqabunga amancinci, athabathe iinxalenye ezinzima ngesando.
Inyathelo 7 Yenza kunye nawo onke amaqabunga.
Isinyathelo 8 Ngoku ulungiselele ukuzaliswa kwamakhowe. Sihlambulula i-anyanisi, izaqathe (ukuzaliswa sisebenzisa i-1/3 ye-kroti yonke), kakuhle ama-halves of pepper kunye nama-mushroom. Imifuno kunye nama-mushroom anqunyulwa kwiibhubhu ezincinci kwaye zinyanyisiwe kwincinci yeoli ye-sunflower ecocekileyo kude kube yicatshuki ephekwe, encinci i-salted ngexesha lokugcoba.
Isinyathelo 9 Ngoku siqokelela imiqulu yeklabishi. Kwiqabunga leklabishi lalala 1-2 (oku kuxhomekeke kumlinganiselo wenani leenxalenye zefotyi yenkukhu kunye nenani lamaqabunga eklabishi ukuya kwanele kwaye akukho mveliso eyongezelelweyo eshiyekileyo) isiqwenga senkukhu yenkukhu, 2 iisupuni. ukugcwalisa amakhowe.
Inyathelo 10 Sifaka umqulu, njengesiqhelo somqulu weklabishi.
Inyathelo 11 Faka i-klabishi ngokukhawuleza epanini. Ingqikithi, ndine iklabishi engaphezulu kwe-22.
Inyathelo 12 Silungiselela i-sauce yesinki. Kwisiko elincinci lokucoca ngobuncinane beoli ye-sunflower ecocekileyo, fry ii-carrots eziseleyo, ityuwa, i-pepper igxutywe kwi-grater eyinqaba, yongeza konke ukhilimu omuncu, kwaye uphuphuke imizuzu engama-5 ngokushisa okuphakathi, uvuselele lonke ixesha.
Inyathelo 13 Gcwalisa imiqulu yeklabishi nge-sauce omuncu.
Inyathelo 14 Beka umlilo omkhulu, gqubuthela ngesigqubuthelo, xa i-sauce ibilisa, vula umlilo kwaye ubeke phantsi kwesiqhekeza malunga nemizuzu engama-45. Khonza iiklabishi ezitshisayo, ufefe nge-ayisikhilimu emuncu, apho bawutyebile khona.
Iifomthi zenyama yenkukhu ebhakiweyo kwi-bacon
Umvuzo wonyaka omtsha 2013
Indlela yokugcina umnqweno kubudlelwane bomntu nomfazi
I-Puree evela kwiipeya
Isiseko sengqondo soqhagamshelwano lwezoshishino
Iimpazamo eziqhelekileyo zabaphathi kwiintsebenziswano kunye nabaphantsi
Unyaka omtsha wee-apula kunye ne-apin
Iifatata ezifihliweyo kunye negalikhi 2